Html_4 - ရောင်ပြန်လေး(နည်းပညာ)
_ PHP & MySQLသင်ခန်းစာ
Home > HTMLသင်ခန်းစာ > Web Development > Html_4
March 26, 2018 HTMLသင်ခန်းစာ, Web Development
ရှေ့ဆုံးအခန်းမှာတော့ Tags တွေနဲ့ Element တွေကွာခြားပုံကို ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်၊ အောက်က စာကြောင်းကိုကြည့်ပါ၊
<p>what the hack is going on with my life</p>
အထက်က စာကြောင်းကို ကြည့်ပြီ Element က ဘယ်အစိတ်အပိုင်းလဲ လို့ မေးရင်၊ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံး က Element ပါ၊ <p> အစကနေ </p>အဆုံးအထိပါ၊ စာသားတွေဖြစ်တဲ့ what the hack is going on with my life ဆိုတဲ့စာသားလဲပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံး ကိုမှ Elementတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်၊ အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ content ပါမယ်၊ အဲ့ဒီ့ Content ကို ၀ိုင်းထားတဲ့ အဖွင့် အပိတ် Tags တွေပါမယ်၊ ဒါကိုမှ Elementတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်၊
<p> နဲ့ </p> တို့က html tags ပါ၊ သူတို့က Element အဆင့်မဖြစ်သေးပါဘူး၊ သူတို့နဲ့ အတူ အကြောင်းအရာ content ပါလာမှ HTML Elementတစ်ခုဖြစ်လာမယ်၊
HTML မှာ Nested Element ဆိုတာရှိပါတယ်၊ Nested Element ဆိုတာ အသိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့ ပုံစံရှိတဲ့ Element ပေါ့၊ သူက အများကြီးကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဝိုင်းထားတယ်၊ Content ကတော့ ခုထဲပါမယ်၊ အောက်က ဥပမာ ကိုကြည့်ပါ၊
<p><b><i>I am not suchagreate guy.</i></b></p>
အထက်က ဥပမာမှာ content ဖြစ်တဲ့ အကြာင်းအရာ I am not suchagreat guy ဆိုတဲ့စာသားကို HTML Tags လေးခုနဲ့ဝိုင်းထားပါတယ်၊ <body>ရယ်၊ <p> ဆိုတဲ့ Paragraph tags ရယ် <b> ဆိုတဲ့ bold tags ရယ်၊ <i> ဆိုတဲ့ italic tag ရယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒီလို အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုHTML Tags တွေအများကြီးနဲ့ ၀ိုင်းထားမယ် ဆိုရင် Nested Elment လို့ခေါ်တယ်၊ Nested Element လို့ခေါ်ရင် html tags တွေရောcontent ဖြစ်တဲ့စာသားတွေကောအားလုံးပါတယ်၊ ဒီတော့ content တစ်ခုကို HTML tags တစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ tags တွေနဲ့ ၀င်းရံပြီး မှတ်သားထားရင်Markup လုပ်ထားရင် အဲ့ဒီ့ အစုအဝေး တစ်ခုလုံးကို HTML Nested Element လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပါ၊
Element တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ HTML tags တွေပေါ်မူတည်ပြီး နာမည်ခေါ်ကြတယ်၊ ဥပမာ paragraph tag နဲ့ ၀န်းရံထားတဲ့ content တစ်ခုပါတဲ့element ကို <p> element လို့ခေါ်မယ်၊ အောက်မှာကြည့်ပါ၊
<p>ငုပ်လျှပ်သာကိုစီ ဆုတ်ကာလွေးတော့သည် ပြီလျှင်ရေမရှာ ခွေးသာကျွေးတော့သည် </p>
အထက်ကHTML Element ကို၊ <p> element လို့ခေါ်တယ်၊
<b>အချိန်ညနေ ဆောင်းအတွင်း အပေါင်းအသင်းနဲ့ ရေခက်လာ</b>
အထက်က HTML Element ကိုတော့ <b> element လို့ခေါ်ပါတယ်၊
<i>မုလေးရုံ တောအစ ဒေါနလမ်းမြေညီ လျှောကျစမ်းရေကြည်တဲ့ ရွှေနှင်းစီကန်ချောင်း
လွမ်းမတတ်စက၀ါ အငူက နံ့သာဖြူလေးမောင့် စံကျောင်း</i>
အထက်က HTML Element ကိုတော့ <i> element လို့ခေါ်ပါတယ်၊
အထက်က ဥပမာ တစ်ခုလုံးကတော့ Html element ဖြစ်ပါတယ်၊
အထက်က ဥပမာ တွေကိုကြည့်ပြီး Nested Element ဆိုတာ HTML tags တစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ tags တွေနဲ့ ၀န်းရံထားတဲ့ content ပါတဲ့အစုတစ်ခုကိုခေါ်တယ်ဆိုတာမှတ်ပါ၊ HTML Element တစ်ခုကိုနာမည်တပ်ခေါ်မယ်ဆိုရင် အရင်ထည့်ထားတဲ့ HTML tag ရဲ့နာမည်ကိုအထူးပြုပြီးခေါ်ရပါတယ်၊
HTML မှာ empty tag တွေလဲရှိတယ်၊ သူတို့မှာ content တွေမပါဘူး၊ <br/> နဲ့ <hr/> တို့က empty element ပါ၊ သူတို့တွေမှာ start tag အဖွင့် ရယ်close tag အပိတ်ရယ် ဆိုပြီးပါတယ်၊ သူတို့တွေမှာ content မပါဘူး၊ self closing လို့ခေါ်တဲ့ ကို့ဘာသာကိုယ်ပြန်ပိတ်ထားတယ်၊ အဲ့ဒီ့လို tags တွေကိုတော့HTML Empty Element လို့ခေါ်ပါတယ်၊
HTML Tags တွေက Case Sensitive အမျိုးအစားတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ကို စာလုံးအကြီးနဲ့ ရေးလို့ရသလို အသေးနဲ့လဲရေးလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အသေးနဲ့ ရေးဖို့အကြံပြုပါတယ်၊
HTML Block Element
HTML မှာစာကြောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်တဲ့ Elements တွေရှိတယ်၊ သူတို့ကိုတော့ Block Element လို့ခေါ်တယ်၊ သင် <h1>what is that </1>လို့ရေးလိုက်ရင် အဲ့ဒီ့ What is that က စာလုံး အကြီးဖြစ်သွားရုံတင်မကဘူး၊ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပါယူသွားတယ်၊ သူဘေးမှာဘယ်သူ့ကိုမှ နေရာမယူခိုင်းတော့ဘူး၊ သူနောက်က လိုက်ရေးတဲ့စာတွေလဲ တကယ်ဝက်ဆိုက်မှာထွက်လာတော့ သူ့နောက်ကမလာပဲ နောက်တစ်ကြောင်းမှာ ပေါ်လာတယ်၊ ဒါကို block လုပ်ပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်၊ အဲ့ဒီ့လို သက်ဆိုင်းရာစာကြောင်းကို block လုပ်ပြစ်တဲ့ HTML elements တွေကို HTML Block Element လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ဥပမာ <h1> <hr> <p> <ul> <table> တို့ပါ၊ နောက်လဲရှိပါသေးတယ်၊
HTML Inline Element
HTML Inline Element ကတော့ Block Element နဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ၊ သူတို့နောက်မှာ အခြားစာကြောင်းတွေလိုက်လို့ရတယ်၊ လိုက်ခွင့်ရှိတယ်၊ သူတို့ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို Block elements တွေလိုမောင်ပိုင် မစီးလိုက်ပါဘူး၊ ဥပမာ <b> <i> <code> တို့လိုမျိုး Elements တွေပါ၊ သူတို့ကtags တွေဖြစ်ပေမယ့် အခုက content တွေပါတဲ့ အနေနဲ့ ရှင်းပြနေလို့ Elements တွေလို့သုံးလိုက်တာနော်၊
The HTML <div> Element
The HTML <div> element isablock level element that can be used asacontainer for grouping other HTML elements.
HTML ရဲ့ <div> Element ဆိုတာက HTML Element အုပ်စုတစ်ခုအနေနဲ့ သုံးလိုတဲ့ HTML Tags များနဲ့ Elements များကို ၀ိုင်းပြီး အုပ်စုတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်၊ <div> element တစ်ခုကို <div> အဖွင့် နဲ့ </div> အပိတ်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးရေးရပါတယ်၊ <div> Element ကို CSSဖိုင်တွေအတွက် အဓိက သုံးပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးအစားတူညီတဲ့ အလုပ်မျိုး အလှဆင်မူမျိုး style ထုတ်မူမျိုးကို လုပ်ဖို့အတွက် <div> ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်လိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုသတ်မှတ်ပါတယ်၊ <div> မှာ အထူးအဓိပ္ပါယ်တော့မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် <div> သုံးထားတဲ့ အုပ်စုက block level element ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှေ့နဲ့ နောက်မှာ အခြား Element နဲ့ Tag တို့မလာနိုင်အောင်စာကြောင်းကိုဖြတ်ထားပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် <div> ပါတဲ့စာကြောင်းကိုBrowser ကတွေ့ရင် သူ့ရဲ့ ရှေ့ နဲ့ နောက်မှာ စာကြောင်းခြားပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ CSS မှာတော့ <div> ကိုအသုံးပြုပြီး HTML မှာ Table တွေနဲ့တည်ဆောက်တဲ့ ၀က်ဆိုက် Layout (နေရာချထားပုံ) ကိုဖန်တီးပါတယ်၊
The HTML <span> Element
<span> element ကို တော့ inline element အဖြစ် HTML Document မှာ စာသားတွေသိုလှောင် တဲ့ နေရာအဖြစ်သုံးပါတယ်၊ <span> element မှာတခြားထူးခြားတဲ့ အဓီပ္ပါယ်တော့မရှိပါဘူး၊ CSS မှာတော့ <span> ကိုအသုံးပြုပြီး စာသားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို Attributes တွေ သတ်မှတ်ပြီး Styleထုတ်ဖို့သုံးနိုင်ပါတယ်၊
ရေနီသားဖြိုးလေး(Myanmar Application Centre)
Web Development Lesson
မြန်မာOnline UserတွေFacebookအစားထိုးအခြားSocial Networkကိုအသုံးပြုကျတော့မလား
IPHONE, IPAD မှာပါဝင်တဲ့ TRUE TONE စနစ်ကို အလွယ်တကူသုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၂ ခု
လက်ရှိထွက်ထားတဲ့ iPhone နဲ့ iPad Pro ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အနေနဲ့ ခုနောက်ပိုင်း iDevice တွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့ True Tone လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလွယ်...
Step2– Install Microsoft Office Pro Plus 2016 Full Version Use system’s default zip file to unzip it, or use software such as ...
Created By ThemeXpose | Edit By Myanmar Blogger Guide